Semalt: Ny Botnet Ny Tsikombakomba Matanjaka Indrindra?
Ireo Botnets dia heverina ho fitaovam-piadiana mahery vaika amin'ny aterineto. Ny Botnets dia mamoaka ireo mpampiasa mpampiasa sy ny fidirana fidirana amin'ny fidirana an-tsoratra tsy misy fanekena sy fahalalana. Jason Adler, Semalt Manager Success Manager, dia manazava fa ity fitaovam-piadiana cyber dia mety hisy fiantraikany amin'ny ordinatera, ny mpanonta na ny mpamorona.
Inona no tokony ho fantatra momba botnets
Botnets dia tamba-jotran-tserasera notendren'ny malware mba hialana amin'ny tranokala sy fitaovana mangina. Ny botnet dia asan'ny mpiompy mpiady, cybercriminals izay mifehy ny bots nefa tsy voatery miditra amin'ny ordinatera. Ny mpiandry mpiandry dia miasa amin'ny alalan'ireo servisy mandidy izay manery azy ireo hamono fanafihana amin'ny fikambanana.
Matetika izy ireo no ampiasaina hangalarana sy hahazo ny fampahalalana ara-bola sy ny tenimiafina. Ny famaritana ny fandikan-dalàna dia ny fampiasana botnets iray hafa, izay andalam-panafody mifehy ny fifamoivoizana na mandefa ny fangatahana an-tserasera amin'ny tranonkala manokana. Amin'ny farany, ny vohikala voatokana dia mihamatotra be loatra, tranga iray izay manery azy ireo hikatona. Vao haingana, ireo tambajotra robot dia nampiasaina betsaka mba hangalarana vola amin'ny fanentanana karakarain'ny olona.
Ny fiakaran'ny tambajotra robot
Nitombo ny anjara andraikitra lehibe amin'ny fitomboan'ny botnets ny fivoarana sy ny fitaran'ny Internet. Ny fitaovan-tserasera (IoT) amin'ny fitaovana (internet) dia mora sy mora ampiasaina ary atahoran'ny botnets raha oharina amin'ny ordinatera. Shodan, motera ho an'ny fitaovan'ny IoT, dia matetika ampiasain'ireo mpiady mpiompy mba hamantatra sy hamantatra ireo fitaovana sy gadget mora vidy ao amin'ny aterineto.
Ireo mpamorona izay manamboatra botnet dia tsy manamboatra tambajotra ho an'ny tombotsoa ara-bola afa-tsy amin'ny rindrambaiko hafa ihany fa manofa azy ireo any amin'ny hafa mpanafika. Ny mpanenjika dia manararaotra ny botnets mba hangalatra sy hiditra ireo vaovao lehibe amin'ny tranonkala. Bredolab botnet dia ohatra iray amin'ny tambajotra robot iray izay nokaramain'ireo mpikomy. Ho setrin'izany, ireo mpanafika dia nahavita nandoa vola 120 000 dolara isam-bolana.
Mirai dia nanaparitaka ny fanafihana an-tserasera hafa izay niparitaka be. Ny mpamorona izay nanamboatra botnet dia nanolotra fitaovam-piadiana cyber ho an'ny salanisan'ny $ 7,500 isan'ora.
Torohevitra momba ny fomba hiarovana ny solosainao amin'ny botnets
Ireo gadra dia heverina ho mampidi-doza satria ny fanafihana dia misy fiantraikany amin'ny tsy fisian'ny mpampiasa mpampiasa. Rehefa raisina ny fampiasana azy, ny solosainao dia maneho tsikelikely ny fifamoivoizana sy ny fahombiazany. Ireto misy tranga momba ny fomba hiarovana ny fitaovana tsy atahorana amin'ny tamba-jotra botnet.
Fintino ireo endri-javatra tsy ilaina amin'ny hazakazaka eo amin'ny solosainao. Ny hackers dia manararaotra ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny endriny sy ny seranana misokatra.
Ny rafitra sy rindrambaiko mahazatra dia eo amin'ny fitaovana misy anao. Ny fikojakojana ny fandaharanao sy ny famandrihana rindrambaiko dia manampy amin'ny famantatra sy fanakanana ireo rakitra sy ny botsika tsy hiditra amin'ny solosainao.
Ampiasao ny tenimiafina matanjaka ary manova ny sehatra fanalahidin'ny solosainao mba tsy hizakana azy. Ny malware sy ny mpanafika dia manadino ny tenimiafina malemy sy ny famolavolan'ny orinasa hahazoana ny fitaovana.
Ao amin'ny sehatry ny varotra amin'izao fotoana izao, ny botnets dia heverina ho fitaovam-piadiana mahery vaika amin'ny Internet. Aza avela hanimba ny fanentanana an-tserasera ny botnets. Mijanona ho mailo amin'ny fampiharana ireo torohevitra voalaza etsy ambony ireo Source .